नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सगरमाथा चढेको हुँ : कामीरिता शेर्पा [भिडियो सहित] - Sagarmatha Online News Portal
कुम्भराज राई ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार
२३ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर शिखरबाट आधारशिविरमा झरे लगत्तै कामीरिता पुनः सगरमाथा चढ्ने तयारीमा छन् । यसैवर्ष २४ पटकको आरोहण र्पुयाएर अर्को साल २५ पटक र्पुयाउने अनि आरोहणको कामबाट सन्यास लिने उनको सोच छ । कामीरितको भावी योजना जान्न आधारशिविरमा उनीसँग गरेको छोटो कुराकानीको अंश ।
२३ औँ पटक आरोहण गरेर आफ्नै किर्तिमानी तोड्नु भएको छ, कस्तो महशुस हुँदै छ ?
मलाई त खुशी लागिराखेको छ । म रेकर्ड राख्नको लागि मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रलाई विश्वमा चिनुन् भनेर आरोहण गरेको हुँ । आफ्नो रेकर्डलाई आफैंले ब्रेक गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्य होइन । अझै नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरु पाउँदो रहेछ भन्ने विश्वलाई थाहा होस् भनेर हिमाल चढेको हुँ । म खुशी छु । मेरो शेर्पा समुदाय र नेपालको नाम राख्न पाउँदा निकै खुशी छु ।
फेरी अर्को आरोहणका लागि जान लाग्नुभएको छ रे, हो ?
म जान पनि सक्छु, नजान पनि सक्छु । हुन चाँही मैले इन्डियन पुलिस टिमको लिडिङ गर्नुपर्ने हो । अहिले निश्चित भइसकेको छैन । जानुपर्छ भनिरहेका छन् ।
यत्तिका पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ । सगरमाथाको रुट र विश्व वाष्पिकरणले हिमालमा कस्तो क्षति पुगेको देख्नुभएको छ ?
ग्लोबल वार्मिङको कारणले कस्तो क्षति र्पुयाइरहेको छ भनेर त सोधिरहन जरुरी देख्दिन । पहिले आधारशिविर कस्तो थियो अहिले कस्तो भईसकेको छ । धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । चट्टानहरु निस्किएका छन् । हिउँ घटेको छ ।
यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिएला ?
यसलाई हामीले रोक्न त सकिन्न होला । एक त मौसमले साथ दिनुर्पयो । अर्को कुरा सरसफाईलाई ध्यान दिनुर्पयो । सफाइकै लागि क्लिन अभियान त यसपालीदेखि शुरु भएको छ । यो पर्याप्त भने भएन । यो अभियानमा सफाई गर्ने आठजना शेर्पा छन् । बेसक्याम्पमा बस्ने चाहीँ नौ दश जना छन् । मलाई अलि यो चित्त बुझेन । बेस क्याम्पमा बसेर हैन । माथी पैसा दिएर २२–२३ जना शेर्पा पठाउँ न । चौथो शिविरमा अहिले एकदमै फोहोर देखिन्छ । मसँग भिडियो नै छ । यसमा सरकारले सरसफाइमा बजेट पठायो भन्दैमा कसरी खर्च भएको छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ ।
त्यहाँ फोहोर चाँही के रहेछ ?
त्यहाँ टेन्टहरु छ । ग्याँसहरु छन् । पालहरु च्यातिएको अवस्थामा छन् । उनीहरुले शेर्पा नपाए किलोको १५ सय दिउन् न सबै टिमका गाइड शेर्पाले ल्याइहाल्छन् नि । किलोको ६ सय दिएर आठ हजार मिटरबाट कसले फोहोर टिपेर ल्याउँछ त ? यो बेसक्याम्पबाट गोरक्सेप र्पुयाउने हो र ? हाइ अल्टिच्यूडको हिसाबले पैसा दिनुर्पयो नि ।
शुभचिन्तकलाई के भन्नुहुन्छ ?
दुर्लभ जन्तरे र टेक नाछिरिङले यसरी बनाए विश्व कीर्तिमानी [भिडियोसहित]